သရဲအကြောင်းစာမျက်နာ(၅) - ချစ်သူ့ အ်ိမ်ကလေးမှကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ..
တွေသမျှသရဲအကြောင်း(၄)မှ အဆက် ဖြင်ပါတယ်သူငယ်ချင်းများ။
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက အဖွားက မြို့ လေးတစ်မြို့ ကို ခေါ်သွားဖူးတယ်။ အဲဒီမြို့ မှာ ကျွန်တော်တို့ အမျိုးတွေ ရှိတယ်ဆိုပြီးလေ။ မြို့ လေးနာမည်ကတော့“ရွှေကျင်” တဲ့ ။ ရန်ကုန်-မန်းလေး လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့“ညောင်လေးပင်”ဆိုတဲ မြို့ ကနေပြီးတော့လမ်းခွဲရတယ်။ “မဒေါက်” ဆိုတဲ့ မြို့ ဆီကို ပေါ့။ အဲဒီကနေ မှ တစ်ဆင့် “ရွှေကျင်” ဘက်ကမ်းကို စစ်တောင်းမြစ်ကို ဖြတ်ပြီးတော့ဇက် (ကားတွေပါတင်လို့ ရတဲ့လှေ ) တွေနဲ့ ကူးကြရတာ။ အခုတော့တံတားကြီးထိုးထားပါတယ်။ ရွှေကျင်မြို့ ထဲကို ၀င်ဝင်ခြင်းမှာ
မြို့ ကျက်သရေဆောင် မုဒ်ဦးကြီး ရှိသဗျှ။ အနော်တွေ့ ဖူးသမျှမြို့ တွေထဲမှာ မြို့ ဝင်ဝင်ခြင်းမှာ ဆောက်ထားတဲ့ မုဒ်ဦးဆိုလို့ အဲဒီဟာ
တစ်ခုပဲ ကျန်တယ်။ မန်းလေးကတော့မြို့ ထဲမှာ နန်းတော်ရှိတာကိုးနော့ ။ ။
အဲဒီမြို့ ကတော်တော်လေး ပျော်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ညီအကို၊ မောင်နှမ တွေလည်း အများကြီးပဲ။ နောက်ပြီးတော့ 
ရွှေကျင်မြို့ ကနေ နှစ်မိုင်လောက် ဝေးတဲ့ နေရာမှာ ခြေတော်ရာရွာ ဆိုပြီးတော့ လည်း ရှိသေးတယ်။ အဲဒီရွာဆိုရင်တော့ 
တစ်ရွာလုံး အမျိုးတွေ ချည်းပဲလို့ အဖွားက ပြောဖူးတယ်။ အဲဒီရွာက အင်္ဂနီ-သံဆိပ် လမ်းမပေါ်မှာ တည်ရှိတာခင်ဗျ။
ရွှေကျင်မြို့ ကနေပြီးတော့အဲဒီရွာကို သွားရင် လမ်းလျှောက်သွားလို့ လည်းရသလို၊ စက်ဘီးတွေနဲ့ လည်း သွားလို့ ၇တယ်။ စက်ဘီးအငှားလိုက်သူကို (ကယ်ရီယာ) လို့ ခေါ်တယ်ခင်ဗျ။ အဲဒီမြို့ ကလူတွေကလေ။ ဆိုင်ကယ်တွေ ပေါ်သေးဘူး။
အခုပြောပြမဲ့ ဇာတ်လမ်းမှာ အဲဒီလမ်းမကြီး အရေးအပါဆုံးပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့ လဲ ဆိုရင် အဲဒီလမ်းကို ညနေခြောက်နာရီကျော်ရင် ဘယ်သူမှ မသွားတော့ ဘူး။ အရေးဟဲ့ ၊ အကြောင်းဟဲ့ သွားစရာရှိရင်လည်း လူတွေစုပြီးတော့ သွားကြတယ်။ မီးတုတ်တွေ၊ မီးတိုင်တွေနဲ့ ပေါ့။ လမ်းမကြီးကတော့ ကြောက်စရာမလိုပေ့ မယ့်လူတွေဟာ ရွာနဲ့ မြို့ နဲ့ ကြားမှာ တည်ရှိနေတဲ့သင်းချိုင်းကုန်းကို
ကြောက်ကြလို့ ပါ။ အရမ်းခြောက်တယ်။ အဲဒါ သချိုင်းကုန်း အလယ်လမ်းမကြီးရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာ ကျွန်းပင် တစ်ပင်စီပေါက်နေတယ်။ အဲဒီကျွန်းပင်ကို “ကျွန်းပင်မောင်နှမ” လို့ ခေါ်သဗျ။ လူတွေက လူစုလူဝေးနဲ့ သွားတာတောင် အဲဒီနေရာရောက်ရင် ဟိုဘက်ကျွန်းပင်ကနေ လျှာကြီးတစ်ခုထွက်လာတယ်။ ဒီဘက်ကျွန်းပင်ကလည်း လျှာကြီးတစ်ခုထွက်လာတယ်။
အဲဒီနှစ်ခုက အလယ်မှာ တွေ့ ဆုံကြတယ်။ ပြီးရင် အသံတွေ ပေါင်းစုံနဲ့ခြောက်လန့် တတ်တယ်။ အဲဒီကြောင့် မြို့ ကလူပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရွာက လူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ညနေခြောက်နာရီကျော်ရင် အဲဒီလမ်းကို တော်ရုံတန်ရုံ သတ္တိနဲ့ တော့ မဖြတ်ဝံ့ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ ရွှေကျင်မြို့ ကို ရောက်တော့နေ့ ဆိုရင် ညီအကိုတွေနဲ့တောတွေထဲ လျှောက်သွားတယ်။ ညဆိုရင် အိမ်အပေါ်ထပ်မှာ စုပြီးတော့သရဲ အကြောင်းတွေ ပြောကြတယ်။ ညီအကို ဘယ်လောက်များလည်းဆိုရင် ဆယ်ယောက်ကျော်လောက်ရှိတယ်ဗျ။ ပြီးတော့ စုပြီးအိပ်ကြတာဆိုတော့သရဲအကြောင်းပြောမိရင် တော်တော်နဲ့ မအိပ်တော့ ဘူး။ အပေါ့သွားရင်လည်း အဖော်ခေါ်၊ ရေထသောက်ရင်လည်း အဖော်ခေါ်နဲ့ပျော်တော့ ပျော်စရာကြီးပါ။ အိပ်ရင်လည်း အနော်က အားလုံးရဲ့ အလယ်ထဲထိရောက်အောင်တိုးတာ။ ပြီးတော့ မှာ စိတ်ချလက်ချအိပ်ရဲတယ်။ မဟုတ်ရင် ကြောက်နေရော။ ပြီးတော့ ပြောတဲ့ သရဲအကြောင်းတွေကလည်း စုံတယ်။ ခြေကလိမ်မတို့ ၊ ခေါင်းပြတ်သရဲတို့ ၊ အဲဒီခေတ်အခါက ခေတ်စားနေတဲ့ကျောပေါက်သရဲတို့ ပေါ့။ ပြောပြီးလို့ အိပ်ချိန်တန်ရင်တော့ဟဲဟဲ ။ ။
အဲဒီတုန်းက ဦးလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ခင်ဗျ။ သူက တော်တော်ကြောက်တတ်တာရယ်။ ဘယ်လောက်ကြောက်တတ်လဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ သရဲအကြောင်းတွေ ပြောပြီဟေ့ ဆိုရင် သူထွက်ပြေးတယ်။ ပြီးရင် နံရံကို နားကပ်ပြီး ခိုးနားထောင်တယ်။ အိပ်ရင်လည်း အလယ်ထဲမှာလာလာအိပ်တယ်။ အနော်နဲ့ ဆို ခဏခဏ ရန်ဖြစ်တာ။ ခလေးမို့ လို့ သူက ညှာပြီးတော့အနော်ဘေးမှာ အိပ်ရတယ်။ပြီးတော့ အပေါ့သွားချင်တာတို့ အိမ်သာတတ်ချင်တာတို့ ဆို အကုန်လုံးကို လိုက်နှိုးတာ။ တော်တော်ဆိုးတယ်ခင်ဗျ..သူကလေ။ သူ့ နာမည်က “သိန်းလွင်” တဲ့ ။ အနော်တို့ က ဦးသိန်း လို့ ခေါ်တယ်။
အဲဒီလိုနေလာတုန်း တစ်နေ့ ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ တည်းတဲ့ ခြံရှေ့ အိမ်က အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက် ဆုံးသွားတယ်။ သူသေသွားတာ ထူးဆန်းတယ်။ ဒီလိုဂျာ… နယ်တွေဆိုတော့ညဆို အိမ်သာတတ်တာတွေ ဘာတွေက ခြံထဲမှာပဲ အိမ်သာတစ်လုံး ဆောက်ပြီး ကိစ္စပြီးကြတာပဲမလား? အဲဒီတော့သေသွားတဲ့ အဒေါ်ကြီးက ညဘက် အိမ်သာသွားတတ်တယ် ဆိုပါတော့ ။ သူတို့ အိမ်ကဆောက်ထားတဲ့ ပုံစံကလည်း အိမ်နောက်ဖေးက တောင်ကုန်းကြီး။ အဲဒီတောင်ကုန်းအောက်မှာ သူတို့ အိမ်လေ။
အိမ်သာက တောင်ကုန်းနဲ့ ကပ်နေတာ။ တောင်ကုန်းပေါ်မှာက ဂျပန်ခေတ်က ကင်ပေတိုင်ရုံးရှိတယ်။ ဂျပန်တွေက လူတွေကို သတ်သတ်ပြီးတော့ တောင်ကုန်းအတိုင်း အလောင်းတွေကို ကန်ချထားတာ။ အဲဒီလို ဇာတ်လမ်းက။ အဲဒီနေရာက သရဲလည်း တော်တော်ခြောက်ပါတယ်။ အိမ်ပိုင်ရှင်အဒေါ်ကြီးက သူအိမ်သာသွားတော့သူ့ ယောင်္ကျားကို ခေါ်သွားတယ်။ စောင့်ဖို့ လေ။
အဲဒါကို သူ့ ယောက်ျားက သူ့ ကိုတော်တော်ချစ်ပါတယ်။ မိန်းမက အ်ိမ်သာထဲလည်းဝင်သွားရော သူလည်း အိမ်ထဲ ပြန်ဝင်သွားတယ်။:P
အိမ်သာတတ်နေတုန်း အနောက်ဘက်ကနေ “၀ုန်း ၀ုန်း” ဆိုပြီး ပြုတ်ကျလာသံကြားလို့အဲဒီအဒေါ်ကြီးက တံခါးဖွင့်ကြည့်မိတာ။
သူမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကို တွေ့ ပြီး သွေးလန့်ပြီး အော်ထည့် လိုက်တာ ကျွန်တော်တို့ တွေ တောင်လန့် နိုးကုန်တယ်။ အဟုတ်။
အကျယ်ကြီး။ အဲဒါနဲ့ ဘာဖြစ်လဲ ဆိုပြီး မီးခွက်တွေထွန်း ဘာထွန်းနဲ့ သွားကြည့် ကြတာ။ အိမ်ကလူကြီးတွေပါ။ ကျွန်တော်တို့ က ပါဝူး
လူကြီးတွေက ရောက်သွားတော့ အဒေါ်ကြီးက အိမ်သာထဲမှာ ကန်တော့ နော် (အီးတန်းလန်းနဲ့ သတိလစ်နေတာ)။ ဘေးအိမ်တွေက ၀ိုင်းကူပေါ့ဗျာ။ သတိရလာအောင် ၀ိုင်းလုပ်ကြတယ်။ သတိလည်းရလာရော တော်တော်နဲ့ အကြောက်မပြေသေးဘူးခင်ဗျ။ သူ့ အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်ပြောပြတယ်။ အသံကြားလို့ ထွက်ကြည့် တော့ကောင်လေးတစ်ယောက်က မြေကြီးမှာ ကုန်းကုန်း ကုန်းကုန်းနဲ့ ၊
လက်တွေကလည်း မြေကြီးကို စမ်းနေသေးသဗျှ။ နောက်တော့ မှာ အဲဒီကောင်လေးစမ်းနေတာ သူခေါင်းကို လိုက်ရှာနေတာ ဆိုတာ သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ အဲဒီအဒေါ်ကြီးလည်း လန့် ပြီးအော်တာပါပဲ။ သူက အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြီးတော့ ခဏနေတော့ကယောင်ကတမ်းတွေ လျှောက်ပြောတော့ တာပဲ။ “ခေါင်းပြတ်ကြီးလာနေပြီ” “ငါဆီလာနေပြီ လုပ်ပါဦး” ဒီလိုတွေ အော်နေတာ။
ကိုယ်ပူရှိန်လည်းတတ်လာတယ်လေ။ နောက် ရပ်ကွက်ထဲက ဆေးဆရာက အိပ်ဆေးတစ်လုံး ထိုးပေးလိုက်တော့ မှ ငြိမ်ပြီး အိပ်ပျော်သွားတာခင်ဗျ။ ဒါပေ့ မယ် မနက်မိုးလင်းတော့ မထလာတော့ဘူးလေ ဟီး ။ အဲဒီတော့ မှ သူယောင်္ကျားလည်း ရင်ကွဲပက်လက်ဖြစ်တာ။ သရဲခြောက်ခံရလို့ အကြောက်လွန်ပြီးသေတာလား (ဒါမှမဟုတ်) ဆေးဆရာ ဆေးမှားထိုးလို့ သေတာလား ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ခွဲခွဲခြားခြားမသိကြဘူး။ လောလောဆယ်မှာတော့ဆေးဆရာက အချုပ်ထဲ ခဏ၀င်လိုက်ရတယ်။
ဒီလိုနဲ့သေသွားတဲ့ အဒေါ်ကြီးရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို ဗမာထုံးစံအရ အိမ်ရှေ့ မှာ အခေါင်းနဲ့ ထားတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဆွေစောင့်မျိုးစောင့် ခုနှစ်ရက် ထားတယ်ဆိုပါတော့ ။ အဲဒီအချိန် အသုဘအိမ်မှာ ဖဲဝိုင်းလုပ်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ခလေးတွေကို အဖွားက အသုဘအိမ်ကို မသွားဖို့ ပြောထားတယ်။ ခလေးဆိုတော့လိပ်ပြာငယ်တယ်လေ။ အဲဒါကြောင့်လည်းပါတယ်။ တစ်ခုခု ပူးကပ်လာမှာဆိုးလို့ ထင်ပါတယ်။ဒါပေ့ မယ် အသုဘအိမ်နဲ့ အနော်တို့ အိမ်က မျက်နှာခြင်းဆိုင်ဆိုတော့အနော်တို့ အိမ်က ကြည့် ရင်တွေ့ နေရတယ်။ အခေါင်းကိုလေ။နောက်ပြီးတော့ရှေးမြို့ ဆိုတော့ အိမ်တွေ ဆောက်ထားတဲ့ ပုံစံက တစ်မျိုးရယ်။ အောက်ထပ်မှာ လူတွေထိုင်ဖို့ မြေကြီးတမံတလင်းနဲ့ ။လူကြီးတွေ အိပ်ဖို့ အဆောင်တစ်ခုပဲ ဖွဲ့ ထားတာ။ အကုန်လုံးက အပေါ်တတ်အိပ်ရတာ။ အပေါ်ထပ်က ပြတင်းပေါက်တွေက သံတိုင်တွေနဲ့ လေ။ တံခါးပိတ်အိပ်ရင် အိုက်လို့ ဖွင့်ထားပြီး အိပ်ရတာ။ သေတာပဲ အဲဒါ။ တံခါးဖွင့်အိပ်တော့အခေါင်းကို မြင်နေရရော။အနော်တို့ က အိမ်ရှေ့ ခန်းအိပ်တာဆိုတော့ပိုသိသာတယ်လေ။ လမ်းမဘက်ကို စောင်းအိပ်မိတာနဲ့အခေါင်းက မျက်နှာနဲ့ တည့် နေတာပဲ။ မတွေ့ လည်း ထထကြည့် ကြတာ။ ခွီး ။ ပြီးတော့ ကြောက်ပြီး ဟိုလူတိုး ဒီလူတိုးနဲ့ ဗျာ။ အဟုတ် တကယ်ပါပဲ ခလေးဘ၀က ပျော်ဖို့ လည်းကောင်းပါတယ်။ ။
ဒီလိုနဲ့ သုံးရက်မြောက်နေ့ မှာ ခြေတော်ရာရွာမှာ ဘုရားပွဲလုပ်တယ်။ အဖွားနဲ့ ကျွန်တော် ဒီမြို့ ကို လာရတဲ့ အကြောင်းရင်းကလည်း အဲဒီပွဲ အတွတ်ပဲ။ ဘုရားပွဲကလည်း တော်တော်လေးစည်ကားတယ်ဗျ။ ညလုံးပေါက်လုပ်တာ။ ဘုရားပွဲနေ့ ဆိုလူတွေက ညနေ လောက်ကတည်းက ရွာထဲက ဘုရားပွဲကို သွားကြတာ။ လှည်းတွေရော စက်ဘီးတွေရော။ အဲဒီလမ်းမကြီးက ဖုန်းတလိမ်းလိမ်းနဲ့ ။
မြို့ ကလူတွေနဲ့ အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကလာတဲ့ လှည်းတွေနဲ့ တော်တော်လေးစည်ကားတယ်။ ပွဲတော်စချိန်က ညနေ ခြောက်နာရီလောက်မှာ ရိုးရာ သိုင်းကစားပွဲနဲ့ စတယ်။ ပြီးရင် ဘုရားရှိခိုးပွဲ စတယ်။ အားလုံးကို အစီအစဉ်တကျလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ 
ရုပ်ရှင်ကို ညလုံးပေါက် ပြတော့ တာပါပဲ။ အဲဒီလိုပြရတာ အကြောင်းရင်းရှိတယ်ဗျ။ ဘုရားပွဲပြီးချိန်က ည ၁ နာရီ၊ ၁ နာရီခွဲလောက်မှ ပြီးတာဆိုတော့အနီးအနားရွာတွေက ပြသနာမရှိပေ့ မယ်။ သချိုင်းကုန်း ကို ဖြတ်ပြီးပြန်ရမဲ့မြို့ သူ မြို့ သားတွေနဲ့မြို့ ဘက်မှာရှိနေတဲ့ ရွာတွေက ပြသနာရှိတယ်။ ။ လူများများနဲ့ ပြန်သွားတာက ပြသနာမဟုတ်ပေ့ မယ်။ နောက်ကျပြီးတော့ ပြန်တဲ့ 
လေးယောက်တစ်စု၊ ငါးယောက်တစ်စု ကတော့မပြန်ရဲကြတော့ ဘူး။ အဲဒီရွာမှာပဲ ညအိပ်ကြပြီးတော့မနက်မိုးလင်းမှ ပြန်ကြတယ်။
အဲဒီလိုနာမည်ကြီးတာ အဲဒီသင်ချိုင်းကုန်းက။ အဲဒီတော့ ဘုရားပူဇော်ပွဲပြီးပြီး ဆိုတာနဲ့ဘုရားဝင်းထဲမှာ ရုပ်ရှင်ပြလိုက်တယ်။ မိုးလင်းပေါက်။ အဲဒီလိုလုပ်လိုက်တော့လူတွေက မပြန်တော့ ဘူး။ ရုပ်ရှင်ကို ညလုံးပေါက်ကြည့် ကြတယ်။ မိုးလင်းမှ ပြန်ကြတာ။
ရုပ်ရှင်ကြည့် ရင်း အိပ်နေတဲ့ လူတွေကလည်း အိပ်နေတာပဲ။ အားလုံးအတွတ် အစဉ်ပြေသွားတာပေါ့ဗျာ။ ။
ပြီးတော့ အဲဒီရွာရဲ့ ရိုးရာသိုင်းကစားပွဲကလည်း အရမ်းဂွတ်တာနော်။ တုတ်နှစ်ဖက်ကို ဟိုဘက်နဲ့ ဒီဘက်မှာ မီးတွေ ရှို့ ထားတယ်။ မီးတောက်ကြီးက အကြီးကြီးရယ်။ အဲဒီလိုရှို့ ပြီးတော့မီးတုတ်သိုင်း ဆော့ တာ။ အာ…ပက်စက်တယ်။ တုတ်ကိုလှည့် ရင်းလှည့် ရင်းနဲ့ ။
အဲဒီမီးတောက်ဟာ အ၀ိုင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်။ ဘယ်လောက်မြန်လည်းဆိုတာ။ မီးသိုင်းဆော့ လို့မီးတုတ်က လွင့်လာတဲ့ မီးဖွားတွေက လူတွေကို လာလာမှန်တာ။ ဒါပေ့ မယ် လူတွေက တိုးပြီးကြည့် ကြတာပဲ။ ပြီးတော့လူနှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် သိုင်းတုတ်နှစ်ချောင်းစီနဲ့ရိုက်ကြတာ။ အတည်ရိုက်တာနော်။ ကြမ်းတယ်။ သဲပြင်ပေါ်မှာသိုင်းကစားကြတာ ဆိုတော့တုတ်ရိုက်ချက်တစ်ချက်ဟာ သဲမြေကို ထိလို့ ကတော့သဲတွေက “ဖွားခနဲ” ပဲ။ လူတွေကိုတောင် လာစင်တာ။ လူတွေကလည်း ပြုံပြီးတိုးနေတော့ တာပဲ။ နောက်ပြီးတော့ဓါးသိုင်းကတာ ရှိသေးတယ်။ အဲဒီဓလေ့ ကတော့ဒီနေ့ အချိန်အခါမှာမရှိတော့ ပါဘူး။
မ က ပြတော့ တာ။ ဓါးသိုင်းကပြီဟေ့ ဆိုရင် ဓါးတွေကို လည်ပင်းမှာ ပတ်ပြတာ။ အဟုတ်။ ဓါးထိသွားရင် ဟက်ခနဲကွဲတာပဲ။ သွေးတော့ ထွက်မလာဘူးနော်။ အဲဒါသူတို့ ဆေးမြစ်လေးတွေရှိတယ်။ အဲဒီဟာလေး အုံ လိုက်ရင် ချက်ခြင်း ပြန်စပ်သွားတယ်။ အဲဒီဆေးမြစ်ကလည်း ဘုရားပွဲ တစ်ချိန်ပဲ စွမ်းတာ ကျန်တဲ့ အချိန်တွေ မစွမ်းဘူး။ ဟီး ။ ။ ပြီးတော့ ဘုရားပွဲက သုံးရက်တောင်လုပ်တာဗျ။ ပထမ တစ်ရက်ပဲ သိုင်းဆော့ တာ ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ နေ့ တွေကတော့ရုပ်ရှင်ပြတာတို့ ဘာတို့ ပါပဲ။
ပွဲဈေးတွေနဲ့ လူတွေကတော့သုံးရက်လုံး စည်တာရယ်။
ဘုရားပွဲစတဲ့ နေ့ က အသုဘအိမ်ရဲ့ သုံးရက်မြောက်နေ့ ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပြီး ဘုရားပွဲက ရွာမှာလုပ်တာဆိုတော့အိမ်ကလူတွေအားလုံးက ရွာကို သွားကြတယ်။ အနော်လည်းပါတယ်။ ရွာရောက်တော့ပိုတောင် ပျော်ဖို့ ကောင်းသေးတယ်။
အဲဒီမှာလည်း ညီအကို မောင်နှမတွေချည်းပဲဆိုတော့ အားလုံးပေါင်း အယောက်လေးဆယ်ကျော်တယ်ခင်ဗျ။ ခလေးတွေချည်းပဲနော် အဲဒါ။ ပြီးတော့ သူတို့ က အနော်ကို ခင်တယ်။ ရှမ်းဘက်ကလာတာဆိုတော့ စကားပြောရင် အနော်ပြောတဲ့ စကားကို သူတို့ က သိပ်နာမလည်ဘူး။ ခဏခဏ ပြန်မေးတယ် သူတို့ က။ အဲဒါတစ်နေ့ ကုန်လျှောက်ဆော့ ပေါ့ဗျာ။ ထွေခင်းတယ်။ ထုတ်စီးထိုးတယ်။
ဘောလုံးကန်တယ်။ အဲဒီလိုတွေလုပ်နေတာ။ အဘိုးရဲ့ ခြံက အကျယ်ကြီးရယ်။ ခြံဝကနေ အိမ်ကို တစ်ခေါ်လောက် ဝေးတယ်။
သစ်ရိပ်ဝါးရိပ်နဲ့ ဆိုတော့ အဲဒီခြံထဲမှာ နေမထိုးဘူး။ အရိပ်ရတဲ့ နေရာတွေမှာ ဆော့ တာရယ်။ ရွာဘုရားပွဲဆိုတော့မြို့ က အမျိုးတွေလည်း အဖိုးအိမ်မှာတည်း။ အဘွားလာတယ်ဆိုတော့ရွာအနီးနားက အမျိုးတွေလည်း လာဆိုတော့အဲဒီမှာပဲ လူတွေတော်တော်စည်ကားတယ်။ ပွဲတော်ဖြစ်နေတာလေ။
ဒီလိုနဲ့ညနေစောင်းတော့အနော်တို့ ဆော့ နေတဲ့ နေရာနားကို ဦးသိန်း ရောက်လာတယ်။ မြို့ ထဲသွားမို့ ဘယ်သူတွေလိုက်မလဲတဲ့ ။
သူက လာခေါ်တယ်လေ။ ခလေးတွေအားလုံးကလည်း ဆော့ ရတာ မောနေပြီဆိုတော့သူ့ နွားလှည်းပေါ်မှာလိုက်ထိုင်ရင်း အမောဖြေမယ်ပေါ့နော်။ အချိန်က ညနေစောင်း လေးနာရီလောက်ဆိုတော့ရွာထဲက ခလေးတွေက နပ်တယ်။ မလိုက်ဝူးခင်ဗျ။
အပြန်တိုင်ပတ်မှာဆိုးလို့ လေ။ အဲဒီတော့အနော်ရယ် ဦးသိန်းရယ်။ နောက် မြို့ ထဲက ခလေးတွေပဲ ငါးယောက်လောက် လိုက်တယ်။
အဘွားကိုလည်း အနော် ခွင့်မတောင်းသွားဘူး။ မြို့ ထဲသွားဖို့ ကိုလေ။ ခဏပဲ ထင်တာပေါ့နော်။ မြို့ ထဲရောက်တော့ဦးသိန်းက ဈေးထဲမှာလိုအပ်တာတွေဝယ် ဘာညာနဲ့တော်တော်လေးကြာသွားပြီး အပြန်မှာ ခြောက်နာရီခွဲသွားပြီ။ ကျွန်တော်ကတော့ မသိပါဘူး။
ဒါပေ့ မယ် ဦးသိန်းရော မြို့ ထဲက ခလေးတွေရောက ရွာထဲ ပြန်မလိုက်ချင်ကြဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့သင်ချိုင်းကုန်းဖြတ်ရမှာကြောက်လို့ ။ အသွားတုန်းကတော့ လင်းလင်းထင်းထင်းကြီးဆိုတော့ အေးဆေးပဲလေ။ အပြန်ကျတော့ မှောင်နေပြီ ဆိုတော့သူတို့ မသွားရဲ တော့ ဘူး။ ဦးသိမ်းကလည်း မရောက်ရောက်အောင်ပြန်ရမှာဆိုတော့နွားလှည်းကို သေသေချာချာတံပိုးတွေ ဘာတွေ ပြန်တပ်တယ်။ ပြီးတော့ ရွာဘက်ကို သွားမယ် ဆိုပြီးမောင်းလာတာပေါ့နော်။ ပါးစပ်ကလည်း
“မကြောက်ပါနဲ့ ဟ။ နင်တို့ ဦးလေး ငါ သိန်းလွင် တစ်ယောက်လုံးပါပါတယ်” ဆိုပြီး အားပေးနေတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ဒီမြို့ ဇာတိမဟုတ်တော့မသိဘူး ခင်ဗျ။ အဲဒါကြောင့် မကြောက်ဘူး အဟီး ။ ။
ဒီလိုနဲ့ သွားရင်း သွားရင်းနဲ့ရွာဘက်ကို သွားတဲ့ လမ်းကို ကွေ့ လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ နွားတွေက တုံကနဲ ရပ်သွားတာ။ ဦးသိန်းတောင် အံ့ သြသွားတယ်။ ဘာဖြစ်တာလဲဟ ဆိုပြီးလေ။ ဘယ်လိုလုပ်လုပ် နွားလှည်းက နောက်ကိုပဲ ပြန်ရုန်းနေတာ ရှေ့ ကို မသွားဘူး။ နောက်ပြီးတော့ဘေးနား ပတ်ဝန်းကျင်က လူပြတ်လိုက်တာ များဗျာ။ အနော်တို့ ပဲ ရှိတယ်။ အဟုတ်။ ရှေ့ နည်းနည်းလေး ဆက်တိုးရင် သချိုင်းကုန်း ရောက်တော့ မှာလေ။ ဘယ်လိုလုပ်လုပ်မရတဲ့ အဆုံး မှာ ဦးသိန်းက နောက်ကို ပြန်လှည့် လာပြီးတော့မြို့ ထဲအိမ်ကို ပြန်ဝင်ကြတယ်။ အဆူခံရရင်လည်း မနက်မှာပဲ အဆူခံတော့ မယ်ပေါ့နော်။ ရွာထဲကလူတွေလည်း သိမှာပဲ အနော်တို့ မိုးချုပ်လို့ မလာတာဆိုပြီးလေ။ ပြီးတော့ မြို့ ထဲကို လှည်းဝင်လာတော့ လည်း မြို့ ထဲမှာ လူတွေ သိပ်မရှိကြဘူးဗျ။ အားလုံးက ရွာဘုရားပွဲသွားနေတာဆိုတော့ ။ လူနည်းတယ်။ မလိုက်နိုင်တဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေလောက်ပဲ ရှိတာ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ လည်း
အသုဘအိမ်က ရှေ့ မှာ။ ဖဲဝိုင်းတောင် နှစ်ဝိုင်းလောက်ပဲ ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ မှာ အနော်က သိတာ ဦးသိန်းတို့ ရွာထဲ မပြန်တော့ ဘူးဆိုတာကိုလေ။ သိသိခြင်း ငိုတာပေါ့ဂျာ။ အဖွားကို ခွင့်မတောင်းပဲနဲ့ထွက်လာတာလေ။ သိရင်ရိုက်မှာ ဟင့် L ။
အခုလို ညလုံးပေါက် သူဆီမပြန်လာတော့ ဘူးဆိုရင် ပိုဆိုးကုန်မှာပေါ့။ အဲဒါကြောင့် ငိုတာ။ ဦးသိန်းကိုလည်း ခဏခဏ ပြောတယ်။
သားကို ပြန်ပို့ ပေး။ ရွာထဲပြန်ပို့ ပေးပါဆိုပြီးလေ။ မြို့ ထဲ အိမ်ကို ရောက်တဲ့ အချိန် (၇) နာရီလောက်က စပြီးတော့ ငိုတာ။ ညကိုးနာရီလောက်အထိ ငိုတုန်း။ ညီအကိုတွေကလည်း ၀ိုင်းချော့ တယ်။ ဦးသိန်းကလည်း ချော့ တယ်။ ချောက်တယ်။ အနော်က ငိုတုန်း။ အာဗြဲကြီးနဲ့ အော်ငိုတာဆိုတော့ ။ အိမ်ရှေ့ အသုဘအိမ်က လူတွေလည်း ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီး အနော်တို့ အိမ်ထဲရောက်လာတယ်။ အနော်ငုိုနေတာ ရွာထဲ သွားချင်နေမှန်း သိသွားတော့“ဟ! ဒီကောင် တောင်ပေါ်သားမလား။ ကျားမြီးဆွဲချင်တယ်ထင်တယ်။ မသွားပါနဲ့ ခလေးရယ်” ဆိုပြီး ၀ိုင်းချော့ တာ။ မရဘူး အနော်က။ သရဲထက် အဘွားကို ပိုကြောက်တယ်။
အဟုတ်။ ဘွားရင် (ဒေါ်နန်းရင်)က မရိုက်ရင် မရိုက်ဘူးဗျ။ ရိုက်ပြီဆို မေမြို့ က အိမ်ရှေ့ ဓါတ်တိုင်မှာ ကြိုးတုပ်ပြီး တီးတာ။ အဲဒီလိုကြမ်းတယ်။ တစ်ခါဆိုလည်း အနော်က ငိုတာ ဘာကိစ္စနဲ့ လည်း မသိပါဝူး။ တော်တော်ငိုတာ။ အဲဒါကို သူသည်းမခံနိုင်တော့ ဘာလုပ်တယ်ထင်တယ်။ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ကြိုးချည်ပြီးေ၇တွင်းထဲကို ထည့် တာ။ အငိုတိတ်မှ ပြန်တင်ပေးတာ။ အဲဒီလို ။
အနော် နှစ်ရက်တောင်ဖျားသွားတယ်။ ဘွားရင် ဟေ့ ဆို အနီးအနားက ခလေးတော်တော်များများက ကြောက်တယ်။ အနော်လည်းကြောက်တယ်။ ချစ်လည်းချစ်တယ် သူကို့ဟင့် ။
အခုလည်း သူကို ခွင့်မတိုင်ပဲ နဲ့ ထွက်လာတာဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့ ငိုနေတာ။ နောက်ဆုံးအားလုံးက လက်လျှော့ လိုက်တယ်။ အနော်ကို ဒီအတိုင်း ပစ်ထားကြတယ်။ ငိုဟာ ငိုဟာ ဆိုပြီးလေ။ အနော်ကလည်း ငိုလို့ ကောင်းကောင်းနဲ့ ငိုတာ။ အသံတွေ ဘာတွေဝင်လို့ ။ အဲဒီတော့ မှ ဦးသိန်းက ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချတယ်။ ဒီကောင် ဆက်ငိုနေရင်တော့ သေတော့ မှာပဲ ဆိုပြီးလေ။
လူကြီးတော်တော်များများလည်း အနော့် ကို ချဉ်သွားတယ်။ သောက်၇မ်းဆိုးတဲ့ ကောင် ကြောင်ချီးဆိုပြီး ဟီး ။ ဂျီတွန်လွန်းအားကြီးတယ် ဆိုပြီးလေ။ အသုဘအိမ်က ဖဲလာရိုက်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဆို “မင်းသာ ငါ့သားဆိုရင် ဟေ့ ကောင် ဆွဲလုပ်လိုက်လို့အရိုးတစ်ခြားအသားတစ်ခြား ဖြစ်သွားမယ်” ဆိုပြီးတောင် ကြိမ်းတာ။ အနော်က သူတို့ ကြိ်မ်းလည်း ငကြိမ်းပါပဲ..
ငိုတုန်း။ အဲဒါနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ သူတို့ ရွာပြန်ပို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ ဦးသိန်းက ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ နောက်ပြီးတော့ အသုဘအိမ်က ဖဲသမားတွေလည်း လူနည်းတော့ ဖဲရိုက်ရတာ ပျင်းတယ် ဆိုပြီးတော့ရွာထဲလိုက်ဖို့ သဘောတူလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ 
အုပ်ကတောင့်သွားတယ်။ အဲဒီမှာ ပြသနာတတ်တာ အသုဘအိမ်ရှင် သူက သူ့ အိမ်မှာ မိန်းမနဲ့ သူနဲ့ နှစ်ယောက်တည်းနေတာဆိုတော့ 
ဖဲသမားတွေနဲ့ အကောက်သမားတွေမှ မရှိရင် သူအိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိတော့ ဘူးလေ။ အားလုံးကလည်း ရွာထဲလိုက်မယ်လုပ်နေတာဆိုတော့ ။ သူတို့ အမျိုးတွေကလည်း မလာသေးဘူး။ အဲဒီတော့ အနော်တို့ မရှိတော့ ရင် အလောင်းကောင်မိန်းမနဲ့ သူနဲ့ နှစ်ယောက်တည်း နေရမဲ့ ကိန်းဆိုက်တာ ခွီး။ ။ အဲဒီမှာ စကားများကုန်ရော။ အားလုံးက သွားချင်တယ် အိမ်ရှင်က သူကို့ ဒီလို မပစ်ထားပါနဲ့ ဆိုပြီး မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ပြောတာ။
အဲဒါလူတစ်ယောက်က “ခင်ဗျား မိန်းမပဲဗျာ။ ချစ်လို့ ယူထားတာပဲဟာကို နေလိုက်ပေါ့” ဆိုပြီးပြောတယ်။
အိမ်ရှင်က “ဟ နင့်တို့ မေ့ လင့် သေနေပြီဟ” ဆိုပြီး ပြန်ပြောတာ။
ချစ်လို့ ယူတာပဲဗျာ။ ရှင်တုန်းကလည်း ချစ်။ သေတော့ လည်း ချစ်ပေါ့။ ဘာလဲ ခုမှ လူဆိုး။ ဆိုပြီး ၀ိုင်းစကြတယ်။ အဲဒီလူကိုလေ။
အနော်က အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို မြင်ပြီး ငိုတာရပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့“ခစ်ခစ်” ဆိုပြီး ရီတာ အသေပဲ။ အနော်ရီသံကြားတော့ လူတွေက “မသာလေး ခုနကြတော့ ငိုနေပြီးတော့အခုကျတော့ ထရီနေတယ်” ဘာညာနဲ့ ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်ရီနေတာ မြင်တော့ မှ အားလုံးက သက်ပြင်းတွေ ချပြီး ဖဲဝိုင်းပြန်စဖို့ ပြင်တယ်။ တော်တော်ကြာကြာထိမသွားကြသေးဘူး။ အဲဒါနဲ့ အနော်က မသွားသေးဘူးလားဆိုတော့သူတို့ အားလုံးက အနော်ကို ၀ိုင်းကြည့် တယ်။ မျက်လုံးပြူးပြီးလေ။ ကျွန်တော်လည်း သဘောပေါက်သွားတယ်။ သူတို့ ကအနော်ကို ချော့ လို့ ရပြီ ဆိုပြီး မသွားတော့ ပဲ နေမလို့ လေ။ ရမလား ငဇူးပဲ ပြန်ငိုလိုက်တာပေါ့ ။ ပွဲဖြစ်သွားတယ်။ ဒေါသထွက်တဲ့ လူတွေထွက်။ ရီတဲ့ လူတွေရီနဲ့ ။ အဲဒါနဲ့ ချက်ခြင်းပဲ ရွာထဲသွားမယ်ဆိုပြီးထွက်လာကြတာ။ အသုဘအိမ်ရှင်ကလည်း မထူးတော့ ပါဘူးကွာ ဆိုပြီး သူမိန်းမ အလောင်းကို ခြံထဲ သွင်းပြီး ခြံတံပါးပိတ်ပြီး သူပါလိုက်မယ်တဲ့။
အဲဒါနဲ့ အားလုံးထွက်လာလိုက်တာ ဦးသိန်းက ကျွန်တော်ကို ချီထားတယ်။ ကျန်တဲ့ ခလေးတွေက လမ်းလျှောက်။ ဒီတစ်ခါတော့ နွားလှည်းမယူလာတော့ ဘူးဗျို့ ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့နွားတွေအလုပ်ရှုပ်တယ်။ သွားချင်သလိုလို မသွားချင်သလိုလိုနဲ့မို့ လို့ ။
အားလုံး မြို့ ထဲက ထွက်လာတော့လူတော်တော်လေးများတယ်။ ၁၂၊ ၁၅ ယောက်ကျော်ကျော်လောက်ရှိတာကိုး အဲဒီတော့ ဘယ်ကြောက်ပါ့မလဲ။
တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ လာလိုက်တာ သချိုင်းကုန်းနားကို ရောက်လာပါလောရော။ အဲဒီမှာ ပြောစရာရှိတယ်ဗျ။ သချိုင်းကုန်းတည်နေပုံနဲ့ သူနယ်နိမိတ်ပေါ့နော်။ မြို့ ထဲဘက်နေကြည့် ရင် ကျွဲတဲ တံတားဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒီတံတားကို ဖြတ်တာနဲ့သချိုင်းကုန်းအစပဲ။
ဘယ်မှာဆုံးလဲဆိုတော့သချိုင်းကုန်းကို ဖြတ်သွားပြီးတော့ဆိုက်နှုိုက် တံတားဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒီတံတား ကျော်ရင် သချိုင်းကုန်းနယ်နိမိတ်အဆုံး။ သချိုင်းကုန်းဖြတ်တဲ့ လမ်းမှာဆိုရင် ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချပ်စီမှာ အုတ်ဂူတွေဖြူဖွေးနေတာပဲ။
ပြီးတော့အလယ်မှာ ဇရပ်ကြီးတွေရှိတယ်။ ရှေးခေတ်ဇရပ်တွေပါ။ အုတ်တိုင်တွေဘာတွေနဲ့ သေသေချာချာလုပ်ထားတာ။
အုတ်တိုင်တွေဆို လူတစ်ဖက်ကျော်တယ်။ အဲဒီလို။
အားလုံးက သချိုင်းကုန်းနီးလေလေ ကြောက်လေလေပဲ။ သွားရင်းသွားရင်းနဲ့ကျွဲတဲတံတားနားေ၇ာက်လာတယ်။ အဲဒီတံတားဘေးမှာ
ညောင်ပင်ကြီးအကြီးကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ တံတားပေါ်ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ ပြသနာက စတာပဲ။ တံတားဒီဘက်ခြမ်းကနေပြီးတော့ ပုဝါတစ်ခုက လွှင့်လာတာ ပြီးတော့တံတား ဟိုဘက်ခြမ်းအောက်ကို ၀င်သွားတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ မြင်ရဲ့ လားမသိဘူး။ တံတားတွေမှာဗျာ။ လက်ရန်းနှစ်ခုရှိတယ်လေ။ အဲဒီလက်ရန်းတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကို ပုဝါလေးလွှင့်သွားတာ။
အဲဒီလို။ အနော်တို့ အကုန်တွေ့ တယ်။ ရှင်းရှင်းကြီးရယ်။ လကလည်း သာနေတာ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ က တံတားပေါ်ရောက်နေတာဆိုတော့ညောင်ပင်ကြီးက ဘေးမှာ ရှိနေတာလေ။ အားလုံးက ကြက်သေသေသွားတယ်။ ဖဲသမားတွေကလည်း ပြေးဖို့ ခြေဦးပြင်နေပြီ။ အခြေအနေက လုံးဝမကောင်းတော့ ဘူး။ ခလေးတွေကလည်း ပြေးတော့ မှာ။
“ဟိတ်! ဘယ်သူလဲကွ” ဆိုပြီးလေ။
အသံထွက်လာတဲ့ ဘက်ကို လှမ်းကြည့် တော့ဦးသိန်း။ ခပ်တည်တည်နဲ့အော်လိုက်တာ။ အားလုံးကလည်း အံ့သြသွားတယ်။
ဘယ်နှယ့် လူကြောက် ဦးသိန်းက အော်ထည့် လိုက်တာ။ အသံက မာလှချည်လားပေါ့။ အားလည်းနည်းနည်းတတ်သွားတယ်။
ပြေးမဲ့ ခြေလှမ်းတွေလည်း ပြန်တုန့် သွားတယ်။
“အော်! လူမှားသွားလို့ ပါရှင်” ဆိုပြီး အဖြေတစ်ခုပြန်လာတယ်ခင်ဗျ။
ဘယ်ကလာတယ်ထင်လဲ ညောင်ပင်ကလာတာ။ ကြက်သီးတွေထတာများဗျာ။ တစ်ဖြန်းဖြန်းပဲ။ ခေါင်းမွှေးတွေပါထောင်ကုန်လား အောက်မေ့ရတယ်။
ဖဲသမားတွေက လှည့် နေပြီ။ ပြေးဖို့ လေ။ ခလေးတွေက စုပြီးတော့ ကပ်နေတာ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဦးသိန်းက ဘာပြောတယ်ထင်တုန်း။
“အေး၊ ငါတို့ အခု ရွာထဲသွားမလို့ ။ ဒါ ငါ့တူတွေနဲ့ ငါသူငယ်ချင်းတွေပဲ။ နင်လူမှားတယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ယောက် ဆက်စောင့်လိုက် ဒါပဲ” ဆိုပြီး
သူက ရှေ့ ကနေသွားတာ။ အဲဒီတော့ မှာ လူကြီးတွေရော ခလေးတွေရော အားလုံး ဦးသိန်းနောက်ကို လိုက်ကြတာလေ။
လူတန်းက ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်။ ဦးသိန်း ပြီးတော့ခလေးတွေ။ အဲဒီနောက်မှ ဖဲသမားတွေအုပ်စုနဲ့ အသုဘအိမ်ရှင်။
တန်းစီပြီးလမ်းလျှောက်လာတာ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်လည်း စကားမပြောဘူး။ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့် ပြီးတော့ကြောက်ကြောက်လန့် လန့် နဲ့ လျှောက်လာ၇တာ။ သချိုင်းကုန်းအလယ်လောက်လည်းရောက်ရော ဇရပ်တွေကို ဖြတ်နေရပြီလေ။ ဇရပ်ထဲမှာ မှောင်မှောင်မည်းမည်းနဲ့ ဘယ်သူမှမရှိနေဘူး။ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ အပင်တွေနဲ့ အုတ်ဂူဖွေးဖွေးတွေ။
အဲဒီအချိန်မှာ လေတွေတဖြူးဖြူး တိုက်လာပြီးတော့ ။ ဇရပ်ရဲ့ သွပ်ပြားတွေက ၀ုန်းဝုန်း ဆိုပြီးတော့ မြည်လာတယ်။
အုတ်ဂူဘေးက အပင်တိုင်းဟာ လှုပ်ယမ်းလာတယ်။ ကျွန်းပင်မောင်နှမက ရှေ့ နားမှာ အပင်တွေယိမ်းထိုးနေတယ်။
သွေးပျက်စရာပါဗျာ။ အနော်ဆို ဦးသိန်း ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းထိုးပြီး မျက်စိမှိတ်ထားတာ။ တစ်ချက်တစ်ချက်တော့ ခိုးကြည့် တာပေါ့နော်။
အဲဒီအချိန်မှာ ဦးသိန်းက အနော်ကို လမ်းလျှောက်ဆိုပြီး အောက်ကို ချပေးတယ်။ ပြီးတော့သူက ခါးတောင်းကို မြှောင်နေအောင် ကျိုက်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အနော့ လက်ကို ဆွဲပြီး သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို အော်ကြီးဟစ်ကျယ်ဆိုတော့ တာပဲ။ သူသီချင်းဆိုတော့ အနောက်ကလူတွေအားလုံးကလည်း အခြေအနေကို သဘောပေါက်သွားပြီး လိုက်အော်ဆိုတာ။ အနော်လည်းပါတယ်။ ခလေးသံနဲ့ ဟီး ။ သီချင်းတွေက အစပ်အဟက် တော့ မတည့် ပါဘူး။ ဘာတွေမှန်းမသိဘူး။
“ကျွန်တော် မမ ပုသိမ်သူ” တွေရော။ “သန်မာထွားကြိုင်းသည်။ ဒန့် ဒန့် တန့် ဒန့် တန့် ဒန်” ဟီး အဲဒီလိုတွေေ၇ာ။ စုံ စေ့ နေတာပါပဲဗျာ။
ကိုယ်ရတဲ့ သီချင်းတွေ ကိုယ်ဆိုတာ။ အဲဒီလို ဆိုဆိုပြီးတော့လျှောက်လာရင်းနဲ့သချိုင်းကုန်း နယ်နိမိတ်အဆုံးဖြစ်တဲ့ ဆွန်နှိုက်တံတားကိုကျော်လာတော့ မှာ အဆိုရပ်တော့ တယ်။ အားလုံးကလည်း အဲဒီတော့ မှ စိတ်ချ၇တယ်။ ဒါပေ့ မယ် ရွာနဲ့ ဝေးသေးတယ်။ ဖာလုံဝက်လောက် ဆက်လျှောက်ရမှာလေ။ အဲဒီတော့ မှ ရောက်မှာ။ အားလုံးကလည်း သချိုင်းကုန်းလွန်ပြီဆိုတော့ 
ပျော်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေး လျှောက်လာလိုက်တာ။ ခြေသံတွေ တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ စကားတွေ လည်း ပြန်ပြောနေပြီ။ ဒါပေ့ မယ် သရဲအကြောင်းကို ယောင်လို့ မှ မ ဟ ဘူးနော်။ ကြောက်စိတ်ပြန်ဝင်လာမှာဆိုးလို့ ။ ညကလည်း ၁၁ ကျော် ၁၂ လောက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ ။ ဒီလိုနဲ့ လျှောက်လာရင်း ဦးသိန်းက ရှေ့ ကနေ လက်ပြလိုက်တယ်။ အဓိပ္ပါယ်က ရပ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့နော်။ အားလုံးက ရပ်လိုက်တယ်။ ခြေသံတွေလည်းရပ်သွားတယ်။ ဒါပေ့ မယ် တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ ခြေသံတစ်ခုက ကြားနေရတုန်းခင်ဗျ။ အဲဒါအားလုံးနောက်ကို လှည့် ကြည့် လိုက်တာ။ လားလား…အရိပ်တစ်ခုဗျ။ အနော်တို့ နဲ့ သိပ်မလှမ်းဘူး။
အနော်တို့ ရပ်ကြည့် တာ မြင်တော့ သူကလည်း ရပ်နေတယ်။ အနော်တို့ ကို ပြန်ကြည့် နေတယ်။ မည်းမည်းကြီးပဲ မြင်ရတယ်လေ။
လက သာတယ်ဆိုပေ့ မယ် နည်းနည်းလှမ်းတော့ မသဲကွဲဘူး။ သေချာတာက ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဆိုတာပဲ။ ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့ ။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်လည်း တော်တော်လေးလှမဲ့ ပုံ။ လရောက်အောက်မှာတော့ လူတစ်ယောက်ပုံစံကို သိသာနေတယ်။
အဲဒါနဲ့ အားလုံးက တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ပြန်ကြည့် တယ်။
ဦးသိန်းက “လူထင်တယ်နော်။ အဖော်မပါဘူးထင်တယ်။ သွားခေါ်လိုက်ပါ” ဆိုပြီးပြောတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒါဖဲသမားတစ်ယောက်က
သွားခေါ်ဖို့ ဆိုပြီး အဲဒီနေရာကို သွားတယ်။ အရိပ်က နောက်ကို ရွှေ့ သွားတယ်။ ဟိုလူက ဆက်သွားတယ်။ အရိပ်ကနောက်ကို ရွှေ့ သွားတယ်။ ဖဲသမားလည်း ဆက်မလိုက်တော့ ပဲနဲ့ပြန်လှည့်လာတယ်။ အရိပ်က ဟိုလူပြန်လှည့် လာတော့ပြန်လိုက်လာတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်တို့ တစ်အုပ်လုံး အရိပ်ဆီကို သွားကြတယ်။ အရိပ်က ကျွန်တော်တို့ နဲ့ ဆန့် ကျင်ဘက်ကို ပြန်လှည့် သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကို မလိုက်တော့ ပဲနဲ့ ပြန်လာရင် သူက ပြန်လိုက်လာတယ်။
နောက်တော့ မှ အသုဘအိမ်ရှင်က ပြောတာ
“ဟေ့ ကောင်တွေ အရိပ်နောက်ကို မလိုက်နဲ့ တော့ ။ အဲဒါငါသိတယ်။ ငါသိတယ်။ ရွာထဲရောက်အောင်သာသွား” ဆိုပြီးလေ။
အားလုံးက ဘာလဲလို့ မေးတော့ မဖြေဘူးခင်ဗျ။ ရွာထဲကိုပဲ သွားခိုင်းနေတာနဲ့ ။ အနော်တို့ လည်း ရွာထဲကို အသားကုန်လစ်တာ။
အရိပ်ကလည်း အနောက်က လိုက်လာတာ မပြတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မြန်သွားရင် သူလည်း မြန်မြန်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ နှေးလိုက်ရင် သူလည်းလိုက်နှေးတယ်။ ပွဲနော်၊ ဘာပွဲမှန်းကိုတိဝူး ဟီး ။ ။
ရွာထိပ်ရောက်တော့ဘုရားပွဲက ရုပ်ရှင်သံက တော်တော်ဝေးဝေးက ကြားနေရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လည်း အားတတ်ပြီးတော့ ဆက်ပြီး လျှောက်လာတာ။ အရိပ်ကတော့ ရွာထိပ်မှာနေခဲ့ သဗျှ။ အထဲကို မလိုက်လာဘူး။ အဖိုးအိမ်ရောက်တော့ အဖွားက ငိုနေတာဗျ။ အနော်တို့ ပြန်လာတယ်ဆိုတာလည်း သိရော။ အနော်ကို ဖက်ပြီး ငိုတာ အဖွားက။ တော်တော်ချစ်ပါတယ် အနော့် ကို။ သူငိုလို့ အားရမှ
ဘေးက ၀ါးခြမ်းပြား ယူပြီး လိုက်ရိုက်တာ။ အနော်တောင် ကြောင်သွားတယ်။ ဟမ် ခုနပဲ ငိုနေပြီးတော့အခုမှ လိုက်ရိုက်တယ်ဆိုပြီးလေ။ အဖြစ်အပျက်က မြန်လွန်းလို့ ပြေးချိန်မရလိုဝူးလေ။ နှစ်ခုထိသွားတယ်။ ဟီး ။ အဖိုးတို့ ဘာတို့ က ၀ိုင်းဆွဲ၊
ဆွေမျိုးတွေက ၀ိုင်းဆွဲ ဆိုတော့ရိုက်ပွဲက ခဏလေးနဲ့ ပြီးသွားပါတယ်။ ဒါပေ့ မယ် မပြီးတာ ဦးသိန်းပါ။ သူက အသုဘအိမ်ရှင်ကို မေးနေတာ။ အဲဒီအရိပ်က ဘာလဲ ဆိုပြီး။ အသုဘအိမ်ရှင်က မပြောချင်ဘူးထင်တယ်ခင်ဗျ။ ဦးသိန်းကလည်း အတင်းမေးနေတာနဲ့ ဆိုတော့ နောက်ဆုံး ပြောပြလိုက်ပါတယ်။
“အေး အဲဒါ ငါ့မိန်းမ” ဆိုပြီးလေ။
အဲဒီအဖြကို ကြားကြားခြင်း ဦးသိန်း သတိလစ်သွားတယ်။ မနက်မိုးလင်းလောက်မှ ပြန်သတိရလာတာ။ အဖျားကလည်း အရမ်းကြီးတယ်။ ယောင်လည်း ယောင်တယ်။ ဘာတွေမှန်းတော့ မသိပါဘူး။ သူက သရဲကြောက်လို့ ဖျားတာလား။ ဒါမှမဟုတ် ဘာဖြစ်လို့ ဖျားတာလဲတော့ခန့် မှန်းရခက်တယ်ဗျ။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုရင် သူဖျားနေတုန်း ကယောင်ကတမ်းပြောတာတွေက
“ချစ်။ အားပွား။ မွှတ်။ အား သရဲကြီး” ဒီလိုတွေ ဆိုတော့ လေ။ ရှုပ်ထွေးနေတယ်။
အနော်တို့ လည်း ဘုရားပွဲပြီးတာနဲ့ ပြန်ခဲ့ ကြပါတယ်။ မေမြို့ ပြန်ရောက်တော့ ရွာက ဖုန်းလာတယ်။ ဦးသိန်းလည်းအဖျားပျောက်သွားတယ်။ အနော်ကိုလည်း နောက်တစ်ခါ မခေါ်လာပါနဲ့ တဲ့ ။ အဲဒီကြောင် မနိုင်ဘူး ဆိုဗြဲ။
အလုပ်ကအပြန် ရွာချလိုက်တဲ့ မိုးကြောင့် ဖွေးတော်တော် စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ် မနက်က လောလောနဲ့မို့ ထီးယူလာခဲ့ဖို့လဲ မေ့သွားခဲ့တယ် ဒါနဲ့ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ကို အပြေးလေး လှမ်းသွားမိတယ် ရုတ်တရက် မိုးတိတ်သွားသလို ခံစားမိတော့ အပေါ်မော့်ကြည့်လိုက်တော့ ထီးမိုးပေးထားတဲ့ လူတယောက်ကို တွေ့လိုက်ရတယ်
” မိုးရွာနေတယ် ထီးမပါလာဘူးလား ” လို့ မြန်မာလို ပီသစွာ မေးလာတဲ့ သူ့ကို
” ဟင် ရှင်က မြန်မာလား ကျွန်မကိုမြန်မာမှန်းသိတယ်လား ဟုတ်ကဲ့ မနက်က လောလော နဲ့မို့ ထီးယူဖို့မေ့သွားလို့ “” နောက်ကို ထီးဆောင်ထားပေါ့ ဒီနိုင်ငံမှာ ရာသီဥတုက အစိုးမရဘူး Mcdonal မှာ လုပ်တာနဲ့တူတယ်နော် ” လို့ ကျွန်မအင်္ကျီကိုကြည့်ပြီး သူပြောတော့
” ဟုတ်ကဲ့ ” လို့ ပြန်ဖြေလိုက်မိတယ် တော်ပါသေးရဲ့ သူ ထီးမိုးပေးလို့ သိပ်မစိုလိုက်ဘူး
” part time job လား ” လို့ မေးလာ တဲ့ သူ့ကို
” ဟုတ်ကဲ့ ကျောင်းအားတဲ့ အချိန် အခန်းခလေး ကြေအောင် လုပ်တာပါ သိပ်အများကြီးလဲ အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါဘူး စာကျက်ရသေးလို့ ”
” ကျွန်တော့်နံမည် ဇော်ရဲထွတ် လို့ခေါ်ပါတယ် ”
” ဟုတ် ကျွန်မနံမည်ကတော့ ဖွေးသန့်စင် ပါ ဖွေးလို့ ခေါ်လို့ရပါတယ် ကျေးဇူးးးနော် ဘတ်စ်ကားလာနေလို့ သွားတော့မယ် ”
” ထီးယူသွားပါလား ” လို့ ပြောတဲ့သူ့ကို
” နေပါရပါတယ် အဆောင်နဲ့ ကားဂိတ်နဲ့က နီးပါတယ် ” လို့ ဖွေး ညာပြောလိုက်မိတယ် ဟုတ်တယ်လေ ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ လူ တယောက် မြန်မာမှန်းတော့ သိပေမယ့် ဒီလောက်ကူညီတာပဲ ကျေးဇူးတင်တယ်လေ
ည ၁၀ မိုးက ပိုသည်းလေပဲ စိတ်ညစ်ပါတယ် ဒီလိုဆို ဖွေး မိုးမိဦးမှာပေါ့လို့ တွေးရင်း သက်ပြင်းချမိတယ် ကားဂိတ်ရောက်တော့ မိုးကမတိတ်သေးဘူး ဒါနဲ့ အပြေးတပိုင်း အဆောင်ကို ပြန်လာခဲ့ပေမယ့် ကားဂိတ်နဲ့ အဆောင်က တော်တော်လေး လှမ်းတော့ မိုးက စိုတော့တာပေါ့ အဆောင်ရောက်တော့ ရေချိုးခေါင်းလျှော် ပြီးတော့ ပါရာစီတမောကို ကော်ဖီပူပူလေး နဲ့ သောက်ပြီး အိပ်လိုက်တယ်
ည ရောက်တော့ အဖျားတက်လာတယ် အိမ်မက်လိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ကားဂိတ်မှာ တွေ့တဲ့ သူ ဖွေးအခန်းထဲဝင်လာတယ် ကုတင်ဘေးနားမှာ ထိုင်ပြီးတော့
” ပြောသားပဲ ထီးယူသွားပါဆို ဘာလို့ အားနာနေတာလဲ ” လို့ နူးညံ့စွာ မေးလာတယ် ဖွေးဘာစကားမှ ပြန်မပြောနိုင်ခင်ပဲ ဖွေးလက်ကလေးကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး
” နေကောင်းသွားမှာပါ နားလိုက်နော် ” ဆိုပြီး အခန်းထဲကနေ ထွက်သွားတယ် မနက်ရောက်တော့ အိမ်မက်လေးကို မှတ်မိနေတယ် ဘာလို့ အခုမှတွေ့တဲ့ သူ့ကို အိမ်မက်ထဲ ထည့်မက်ရတာလဲ ဆိုတာ ဖွေးစဉ်းစားလို့မရဘူး စိတ်ထဲမှာ မတင်မကျကြီး တခုခုကို စိတ်တိုနေတယ် နေကတော့ ကောင်းသွားပါပြီ ဒါနဲ့ ကျောင်းကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ် ဒီနေ့က မနက်ပိုင်းပဲ ကျောင်းရှိတာ ညပိုင်းအလုပ်ရှိတယ်
” နေကောင်းသွားပြီလား ” လို့ မေးလာတဲ့ သူ့ကို ဖွေး ရုတ်တရက် အံ့သြစွာ ကြည့်မိတယ် သူက
” မိုးမိလို့ နေမကောင်းဖြစ်မယ်ထင်လို့ပါ ” ဆိုတော့
” ဟုတ် ကောင်းသွားပါပြီ ဒါနဲ့ ရှင်က ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်တာလဲ ” ဆိုတော့
” ဘဏ်မှာလေ Lloyds ဘဏ်မှာ လုပ်တယ် ကိုယ်က Accounting နဲ့ပြီးထားတာဆိုတော့ ”
” အော် အင်း ကောင်းတာပေါ့ ဘယ်ကိုပြန်မှာလဲ ” လို့ စပ်စုမိတော့
” ကျွန်တော်က ဒီနားလေးတင်နေတာပါ ” တဲ့ ဘေးနားက အင်္ဂလိပ်က ဖွေးကို လှည့်ကြည့်တယ် အေးလေ မြန်မာလိုပြောနေတော့လဲ သူ မကြားဖူးလို့ လှည့်ကြည့်တာနေမှာ လို့ တွေးလိုက်မိတယ်
” ဟုတ်ကဲ့ ဖွေးသွားတော့မယ်နော် ကားလာနေပြီ ” ဆိုပြီး လက်ပြ နှုတ်ဆက်ကာ ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်
ဒီနေ့ တနေကုန်က အတန်းရှိတယ် ဒီနေ့ဆိုရင် အလုပ်မလုပ်ဘူးလေ ဒါနဲ့ ညနေ ၅ နာရီလောက် အဆောင်ပြန်ရောက် စားသောက်ပြီးတော့ အိမ်စာလေး ဘာလေး လုပ်ပြီး အိပ်ယာဝင်ခဲ့တယ် အိမ်မက်ထဲမှာ သူ့ကို တွေ့တယ် သူက
” ဒီနေ့ဘာလို့မလာတာလဲ ဗျာ ကျွန်တော် စောင့်နေတာ ”
” ဟင် ဒီနေ့ ကျောင်းရှိလို့လေ တနေကုန်ဆိုတော့ အလုပ်မလုပ်ဘူး ”
” ဟုတ်လား မသိဘူးလေ ” တဲ့ အဲလိုပြောပြီး သူ ထွက်သွားတယ်
မနက် အိပ်ယာလဲ နိုးတော့ ဖွေး စိတ်ထဲ သင်္ကာမကင်းဘူး ဇဝေဇဝါရယ် ဘာလို့ သူ့ကို အိမ်မက်မက်ပြန်ရတာလဲ ဖွေးကိုယ့်ကိုယ်ကို လုံးဝမကျေနပ်နိုင်ဘူး သူ ဘာလို့ အိမ်မက်ထဲ လာရတာလဲဆိုတဲ့ ပုစ္တာကို ဖွေး အဖြေရှာလို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်
အတန်းမရှိတဲ့ ဒီနေ့လိုမျိုးဆိုရင် ဖွေး မနက်ပိုင်း လုပ်တာများတယ် ညနေပိုင်းအထိပေါ့ အရင်ရက်တွေကလောက်တော့ နောက်မကျဘူးပေါ့ အလုပ်ပြီးတဲ့အချိန် ၅ နာရီလောက် ကားဂိတ်မှာ စောင့်ရင်း သူ့ကို စိတ်ထဲက မသိမသာ မျှော်ကြည့်မိတယ် သူ့ကို မတွေ့တာနဲ့ အင်းလေ သူအလုပ်မပြီးသေးလို့ နေမှာပေါ့ ဆိုပြီး တွေးဖြစ်ခဲ့တယ်
” ဖွေး ကိုယ့်ကို စောင့်နေသေးလား ဟင် ကိုယ် မအားလို့ပါ ” လို့ပြောလာတဲ့ သူ့စကားကြောင့် ဖွေးကိုယ်ဖွေး ရှက်သွားခဲ့တယ် ဘာစကားမှပြန်မပြောနိုင်ခင်ပဲ အိပ်ယာကနေ နိုးလာခဲ့တယ် ဟင် ငါ အိမ်မက်မက်နေတာပဲ ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ အတူ ဘာလို့ သူ့ကို မက်ပြန်ရတာလဲ ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒေါသထွက်မိတယ်
ဒီလိုနဲ့ သူနဲ့ ခင်ခဲ့ကြတာ ကြာလာခဲ့ကြတယ် ဖွေးကိုယ်တိုင်လဲ သူ့ကို မသိမသာ သံယောဇဉ် ဖြစ်လို့နေခဲ့တယ် မှတ်တိုင်ရောက်ရင် မျက်လုံးက သူ့ကိုမသိမသာရှာနေမိခဲ့တယ် သူ့ကိုတွေ့ရင် ဖွေးပျော်တယ် မတွေ့ရတဲ့အချိန်တွေဆို ဖွေးစိတ်ထဲမှာ တမျိုးပဲ ဒါပေမယ့် ဖွေးသိတယ် ည ကျရင် သူ့ကို အိမ်မက်မက်မယ်ဆိုတာ ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ သူနဲ့ မတွေ့ရတဲ့နေ့တွေဆိုရင် သူ ဖွေးအိမ်မက်ထဲကို လာတယ် စကားတွေပြောကြတယ် သူမအားတဲ့အကြောင်းပြောပြီး တောင်းပန်တယ် ဖွေးသူ့ကို ချစ်မိနေပြီလား ဖွေးကိုယ်တိုင် မသိတော့ဘူး သေချာတာကတော့ ဖွေး သူ့ကိုတွေ့ချင်နေမိတယ်
” ဆောင်းတွင်းရောက်လာပြီနော် ဖွေး ဂရိုစိုက်ဦး အေးတယ် သိလား ” လို့ ပြောလာတဲ့ သူ့ကို ဖွေးကြည့်မိတော့ သူက ပြုံးပြပြီးတော့
” ခင်ဗျားလေး နေမကောင်းဖြစ်ရင် ကျွန်တော့်ကို မတွေ့နိုင်မှာစိုးလို့ ပေါ့ ” လို့ ပြောလိုက်တဲ့ သူ့စကားကြောင့် ဖွေးရင်ထဲ နွေးခနဲ ဖြစ်သွားတယ် စိတ်ထဲမှာတော့ အပြင်မှာမတွေ့ရလဲ အိမ်မက်ထဲ ရှင်လာတာ ဖွေးသိသားပဲ လို့ ပြန်ပြောလိုက်မိတယ် ဖွေးကိုယ့်ဟာကိုယ် တွေးပြီး ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ ခေါင်းငုံ့ထားလိုက်မိတယ် သူက
” ဇက်ကြီးလဲ ကျိုးသွားပါဦးမယ် ဗျာ ” ဆိုတော့ ဖွေး ရီမိတယ် ဒီတော့ သူကလဲ လိုက်ရီတယ် ပြီးတော့ ဖွေးကို
” ကျွန်တော့်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ပြောပြချင်တယ် ဒါပေမယ့် မပြောပြရဲဘူးဗျာ ” တဲ့ ဖွေးက
” ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ရှင်ပြောချင်တဲ့အချိန်ကျရင်ပြောလိုက်ပါ ဖွေး နားထောင်ပေးပါ့မယ် ဖွေး ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်မပြောပါဘူး ဖွေးကို ယုံရင်ပေါ့လေ ” ဆိုတော့ သူက
” ဖွေးကို ကျွန်တော် မယုံလို့မဟုတ်ပါဘူး ဖွေး ကျွန်တော့်အပေါ်သဘောထား ပြောင်းသွားမှာ စိုးလို့ပါ ” တဲ့ ဘာတွေလဲ ဖွေးက ဘာကိုသဘောထားပြောင်းရမှာလဲ မေးခွန်း မမေးလိုက်ရခင်ပဲ သူက
” ဖွေး ကားလာနေပြီ တာ့တာနော် မနက်ဖြန် တွေ့မယ် ဘိုင် ” ဒါနဲ့ ဖွေးလဲ ကားပေါ်တက်ခဲ့လိုက်တယ် လက်ပြရင်းကျန်ခဲ့တဲ့ သူ့ကို ဖွေးထားခဲ့ရတာ တမျိုးကြီးပဲ
ဟင်းးးးးးးး လို့သာ သက်ပြင်းရှည်ကြီးချရင်း သူ့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် ဆိုတာကို သိချင်နေမိတယ် ဘာတွေများဖြစ်နေမလဲ….
လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ အတိတ်ကိုယ်စီ ရှိခဲ့ကြတာပဲလေ သူက ရော ဘာအတိတ်တွေ ရှိခဲ့လို့လဲ ပြင်မရတဲ့အတိတ်ကြောင့်လား ဘာတွေ လျှို့ဝှက်ထားတာလဲ မေးခွန်းပေါင်းစုံနဲ့ ဖွေးသူ့ကို ဒီနေ့ည အိမ်မက်ထဲမှာ တွေ့လိုတွေ့ညား ရှာကြည့်ပါသော်လည်း သူ ရောက်မလာခဲ့ပါ မနက်မိုးလင်းတော့ လူက နုံးချိစွာပဲ လှပတဲ့ မနက်ခင်း ကို နောက်ကျိတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းခဲ့တယ် ဒီနေ့ တော့ သူ့ကိုရအောင်မေးရမယ် သူမပြောမချင်း ငါ အဆောင်မပြန်ဘူးလို့ အကျပ်ကိုင်ရမယ် လို့တွေးပြီး သူ့ကို တွေ့ချင်စိတ်ပြင်းပြ နေခဲ့တယ် အလုပ်ကိုလဲ ခါတိုင်းထက် မြန်မြန်လေး ပြီးချင်နေခဲ့တယ်
” ကျွန်တော့်ကို မေးခွန်းမေးဖို့စောင့်နေတာလား ” လို့ မေးလိုက်တဲ့ သူ့စကားကြောင့် ဖွေး မအံ့သြဘဲ မနေနိုင်တော့ဘူး
” ဟုတ်တယ် ” လို့ ဖွေးဝန်ခံခဲ့လိုက်တယ် သူက မချိပြုံးပြုံးပြီးတော့
” ဖွေး စိတ်ကို ကျွန်တော်သိနေတာပဲ ကျွန်တော့်မပြောရင် ဒီနေ့ အဆောင်မပြန်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ် မလား ” လို့ ပြောလာတဲ့ သူ့စကားကြောင့် ဖွေး ဒုတိယမ္ပိ အံ့သြသွားခဲ့ရပြန်ပါတယ် ဒါနဲ့ ဒုတိယအကြိမ်
” ဟုတ်တယ် ” လို့ပဲ ခပ်ပြတ်ပြတ် ပြန်ဖြေခဲ့တယ် သူက သက်ပြင်းလေး မသိမသာ ခိုးချပြီးတော့
” ဖွေးရယ် မကြောက်နဲ့နော် ကျွန်တော် အမှန်အတိုင်းပြောမယ် ကျွန်တော်ဟာ တကယ်တော့ လူသားတယောက်မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်ဟာ ဝိညာဉ် ပါ ”
” ဟင် ” လို့ အံ့သြသွားတဲ့ ဖွေးကို
” ဖွေး သိပ်ကြောက်သွားလားဟင် ” ဆိုတော့ ဖွေး ဖြေးညင်းစွာခေါင်းခါပြလိုက်မိတယ်
” ဖွေးကို ပြောပြလို့ရမလားဟင် ဖွေးကူညီနိုင်ရင် ကူညီရတာပေါ့ ” ဆိုတော့ သူက
” ပြောပြပါ့မယ် ကျွန်တော်ကလေ သိပ် အလုပ်တာဝန်ကျေတဲ့ လူတယောက်ပေါ့ ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ စာရင်းကိစ္စ မပြီးခင်မှာပဲ ကျွန်တော် ကားတိုက်ပြီး သေခဲ့ရတယ် ကျွန်တော် လျော်ကြေးအများကြီးရပေမယ့် ကျွန်တော် မကျွတ်ခဲ့ဘူး ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ အလုပ်ကို စိတ်စွဲနေလို့လေ ”
” ဘယ်တော့ ကျွတ်မှာလဲဟင် ဖွေး အမျှဝေမယ်လေ ” ဆိုတော့
” နီးပါပြီဖွေး မနက်ဖြန် ည ဆိုရင် ကျွန်တော့်ကို လာခေါ်ကြတော့မယ် ”
” ဟင် ဒါဆိုရင် ဖွေးတို့မတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့နော် ” လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဖွေးရဲ့စကားကြောင့်
” ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော် ဖွေးကို သတိထားမိတာ ကြာပါပြီ ကျွန်တော် ကိုယ်ထင်မပြဘူးလို့ တင်းထားပေမယ့် ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် မထိန်းနိုင်တာရယ် အဲဒီနေ့က ဖွေးမိုးစိုမှာစိုးလို့ ကျွန်တော်…. ” သူ ဆက်မပြောပဲ စကားကို ရပ်ထားလိုက်တယ် ဖွေးအရာ အားလုံးကို သိလိုက်ပြီ ရင်ထဲမှာ တဆစ်ဆစ်နာနေတယ် သူက ဖွေးကို
” ကျွန်တော် တောင်းပန်ပါတယ် ဗျာ ” ဘာလို့လဲ တောင်းပန်စရာ မလိုပါဘူး သူရယ် လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဖွေးရဲ့စကားတွေ လည်ချောင်းဝ မှာပဲ ဆို့နေခဲ့တယ်
” ကျွန်တော် တခုတော့ ပြောခဲ့ချင်ပါတယ် ဖွေးရယ် ကျွန်တော်လေ ဖွေးကို တကယ်ချစ်တာပါ ” တဲ့ ဖွေးသည်းခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပဲ မျက်ရည်များ ပိုးပိုးပေါက်ပေါက် ကျလာခဲ့တယ် ဗလုံးဗထွေးနဲ့
” ဖွေးလဲ ရှင့်ကို ချစ်ပါတယ် ” လို့ ပြန်ပြောခဲ့တယ်
” ဘယ်လိုမှ ပေါင်းစပ်လို့မရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘဝ ၂ ခု ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ အပြစ်မတင်ချင်ပါဘူးဗျာ ဖွေး ပျော်ရွှင်ပါစေ နော် နောက်နေ့တွေ ကျွန်တော့်ကို မစောင့်ပါနဲ့တော့နော် ကျွန်တော် မရှိတော့ဘူး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ ဂရုစိုက်ပါ ကျွန်တော်သွားတော့မယ် ” ဆိုပြီး ဖွေးကို ထားခဲ့ကာ ထွက်သွားတဲ့ သူ့ကျောပြင်ကိုကြည့်ရင်း တဖြေးဖြေး ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်…။ ။
ရေးသူ = ၀က်ဝံလေး
ပန်း ဒီနေ့ အထူးကို တက်ကြွနေပါသည် များမကြာမီ ကိုကိုနဲ့ လက်ထပ်ပြီး အိမ်ထောင်ရှင်မ ဖြစ်တော့မည် မဟုတ်ပါလား ခွင့် ၄ ပါတ်ယူထားတယ် မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ စီစဉ်ရဦးမယ်လေ မေမေတို့တောင် နောက် ၂ ရက် ၃ ရက်လောက်နေရင် နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတော့မယ်လေ ကိုကိုနဲ့ချိန်းထားတဲ့ နေရာကို ဦးအောင် ရောက်နေလိုက်တယ် ဆိုင်ထဲမှာလူရှင်းနေတယ် အချိန်က ညနေ ၆.၃၀ ခဏနေတော့ ကိုကို ရောက်လာတယ်
” ဒီနေ့စောလှချည်လား ” တဲ့ သူ့စကားသံတွေထဲမှာ ခနဲ့သံတွေ ပါနေသလိုပဲ ပန်းလဲ ရန်မဖြစ်ချင်တော့တာတဲ့
” လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စစီစဉ်ရအောင်လေ ခွင့် ၄ ပါတ်တောင် ယူထားတယ် မေမေတို့လဲ ပြန်လာတော့မယ် မေမေတို့ ပြန်လာရင်တော့ ပန်းလဲ ဆေးရုံက အဆောင်မှာ မနေတော့ဘူး ပြန်အပ်လိုက်တော့မယ် လေ ” ကိုကို့ပုံကြည့်ရတာ အေးတိအေးစက်နဲ့ စိတ်မပါသလိုပဲ
” ကိုကို ပစ္စည်းတွေ ဘယ်တော့ သွားဝယ်မလဲ ဟင် မနက်ဖြန်လား ဘယ်အချိန်လဲပြောလေ ပန်းအခုဆိုရင် အားပြီ ”
” အဲဒီ မင်္ဂလာပွဲ ကိစ္စပြောမလို့ ” လို့ ကိုကို ကပြောတယ်
” အင်းပြောလေ ” ဆိုတော့
” မင်္ဂလာပွဲ ဖျက်သိမ်းရအောင် ကိုယ်က အချစ်မပါတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို မတည်ဆောက်ချင်ဘူး ”
” ဘာ အချစ်မပါတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဟုတ်လား ဘာလို့ အဲဒီလိုပြောရတာလဲ ”
” မင်းကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်လို့လား မင်းရဲ့လူနာတွေလောက်တောင် ကိုယ်က အရေးပါလို့လား ရုပ်ရှင်နှစ်ယောက်သားအေးအေးဆေးဆေး သွားကြည့်ပါတယ် အရေးပေါ်အခြေအနေ ဆိုလို့ မင်းဆေးရုံကို ပြေးရတယ် နှစ်ယောက်သား ချိန်းတွေ့တယ် လူနာဘာဖြစ်ပြန်ပြီဆိုပြီး သွားရပြန်ပြီ ဒါမျိုး တခါ မကဘူး ပန်း ကိုယ်သည်းခံခဲ့တယ် အခုတော့မရတော့ဘူး ကိုယ်သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး နောက်လက်ထပ်ပြီးရင်လဲ ဒီလိုမျိုးတွေပဲ လာဦးမှာပဲ ပန်း ဒီတော့ အချိန်တွေမလွန်ခင် ကိုယ်တော့ နောက်ဆုတ်လိုက်ကြရအောင်လား ”
” ကိုကို အသစ်တွေ့နေပြီလား ” ကိုကို က ဘာမှပြန်မပြောဘူး
” ဘယ်ကလဲကောင်မလေးက ”
” ဘာလဲ မင်းပြသနာ သွားရှာမလို့လား ”
” ကိုကို ပန်းကို အဲလောက်တောင် အထင်သေးလှချည်လား ဘာလဲမေးလို့တောင်မရဘူးလား ” ပန်းရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဒေါသတွေ အရမ်းထွက်နေတယ် လူကို အရှိုက်ကို ဆောင့်ကန်လိုက်သလိုပဲ ဒေါသတွေ အလိပ်လိပ်တက်ပြီး ငိုချင်လာတယ် ဒါပေမယ့် မငိုပါဘူး သူ့ရှေ့မှာ ဘယ်တော့မှ မငိုဘူး ယောက်ျားတယောက်ရှေ့မှာ ပန်း ဘယ်တော့မှ မျက်ရည်မကျဘူး မှတ် ဒါနဲ့ အားတင်းပြီး ပြောလိုက်တယ်
” ကောင်းပြီ ကိုကို မေမေတို့လာတော့ ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြတာပေါ့ ပန်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပါ့မယ် ပျော်ရွှင်ပါစေ ” လို့ပြောပြီး ထွက်လာခဲ့တယ် ကိုကို့ရဲ့ မျက်နှာကိုလဲ မမြင်ချင်မကြည့်ချင်တော့ဘူး ကားပေါ်မှာ ရှိုက်ကြီးတငင် ပန်း ငိုနေမိတယ် သူ့ရှေ့မှာ မျက်ရည်မကျသမျှ အခု မျက်ရည်တွေက အတားအဆီးမရှိ တလဟော ထွက်ကျလာတယ် အဆောင်ရောက်ရင် တယောက်တည်း ကြိတ်ကာ ငိုရပေဦးမယ် မျက်ရည်တွေကို လက်ဖမိုးနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းသုတ်ကာ ကားမောင်းလာခဲ့တယ်
စဉ်းစားရင်းတွေးရင်း မျက်ရည်တွေကျလာတယ် တနေရာရပ်ပြီး ငိုမယ် အလုပ် လူတယောက်ဖြတ်သွားတာ တွေ့လိုက်တာနဲ့ ပန်း ရှောင်လိုက်တယ်
ဆိုပြီး သစ်ပင်ကို ဝင် တိုက်မိတယ် အရေးမကြီး ဘူး ခုဏက လူဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး သိချင်ဇောနဲ့ ကားပေါ်ကနေ ဆင်းလာခဲ့တယ် တွေ့ပါပြီ သူက အေးဆေးပဲ ပန်း ကိုကြည့်နေတယ်
” ဟိုလေ ရှင် ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး ” သူက နဲနဲကြောင်နေတယ် ပြီးမှ
” ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး မိန်းကလေး ကားတော့ ချိုင့်သွားပြီနော် ” ပန်းလဲ
” ဟုတ်တယ် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ Taxi ငှားပြီး အိမ်ပြန်မှ နဲ့ထင်တယ် ပြီးမှ ဝပ်ရှော့ဆရာ ကို ဖုံးဆက်လှမ်းပြောလိုက်မယ်လေ ” ဆိုတော့ သူက
” ဟိုမိန်းကလေး တကယ်လို့ အားမနာဘူးဆိုရင် ကျွန်တော် ကူညီလို့ရပါတယ် ကျွန်တော့်အိမ်မှာ ခဏလောက်နားပြီး နေပါ့လား ကျွန်တော့်အသိ ဝပ်ရှော့ဆရာကို ဖုံးဆက်ပြီးပြောပေးမယ်လေ သူ ကားလာယူလိမ့်မယ် အခုတော့ မိုးချုပ်နေတော့ လေ မိန်းကလေးတယောက်တည်း Taxi နဲ့ပြန်လို့ဖြစ်ပါ့မလား ” ပန်းတွေသွားတယ် ဟုတ်သားပဲ သူပြောတာလဲ ဒါနဲ့
” ရှင်တယောက်တည်းနေတာလား ” ဆိုတော့
” မဟုတ်ပါဘူး အမေနဲ့ အဖေ ရှိပါတယ် ” တချက်လောက် စဉ်းစားပြီးတော့ ပန်းသူ့အိမ်ကို လိုက်သွားခဲ့တယ် သူက မိတ်ဆက်တယ်
” ကိုယ့်နံမည် သိန်းထိုက်ပါ ကိုထိုက်လို့ခေါ်လို့ ရပါတယ် ဒီက ညီမလေးကရော ”
” ပန်းပါ ”
” အော် နံမည်လေး ကချစ်စရာလေးပဲ ” သူ့အိမ်ရောက်တော့ သူ့မေမေနဲ့ ဖေဖေကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြတယ် ပြီးတော့ ချက်ချင်းပဲ ဝပ်ရှော့ ဆရာဆီကို ဖုံးဆက်ပေးတယ် အန်တီက
” သမီး ဘာမှ အားမငယ်နဲ့နော် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး လာ ဒီအိပ်ခန်းမှာ သမီး အိပ်လို့ရတယ် ဒါက ဧည့်သည်တွေအတွက်လေ ဒါကြောင့်အမြဲရှင်းထားတာ ”
” အော်ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါပဲ မနက်ကျရင် ကျွန်မ ပြန်မှာပါ အခုတော့ အန်တီတို့ကို ဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်နေပါပြီ ”
” ရပါတယ်သမီးရယ် အန်တီတို့ကို အဲလိုပဲ ကူညီနေကျပါ ” ဒါနဲ့ ပန်းလဲ ကုတင်ပေါ်မှာ မျက်လုံးကို မှိတ်ထားလိုက်တယ် မစဉ်းစားချင်ဘူး သူ့အကြောင်းကို
မနက်ရောက်တော့ အန်တီက မနက်စာ ပြင်ထားပေးတယ် စားသောက်ပြီးတော့ အိမ်ဖော်ကောင်မလေး မတွေ့တာနဲ့ အန်တီ့ကို ကူလုပ်ပေးလိုက်တယ် ပြီးတော့ အန်တီတို့ကို ကျေးဇူးတင် စကားပြောပြီး ပြန်မယ်လုပ်တော့ သူတို့က တယောက်မျက်နှာ တယောက်ကြည့်ပြီးတော့ အန်တီက
” သမီး ဒီအိမ်မှာ နေရတာ မကျဉ်းကျပ်ဘူးဆိုရင် သမီးရဲ့ ကားရမှ ပြန်ပါလား သမီးနောက်ဆံတင်းစရာ ရှိလို့လား ” ဒါနဲ့ပန်းလဲ
” မရှိပါဘူး ဒါပေမယ့်… ”
” အားမနာပါနဲ့ သမီးရယ် ဒီနေ့ အရာရှိလေး လာလိမ့်မယ် သူ့ကိုမေးပေးမယ်နော် ” ဘာလဲ အရာရှိလေး ပန်းစိတ်ထဲ ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတယ် ကိုထိုက်က ဝင်ပြီးတော့
” အော် ဧည့်စာရင်းစစ်ကို ပြောတာ ပါ ပန်းရ ”
” အော်အော် ” အင်းလေ အဆောင်မှာတယောက်တည်း ကြိတ်ပြီး ဆွေးနေမယ့်အတူတူ လူအများနဲ့ဆိုတော့ နဲနဲတော့ သက်သာမယ်ထင်တယ်လို့ စိတ်ထဲက တွေးလိုက်မိတယ် ဒါနဲ့
” ဟုတ်ကဲ့ပါ ” ဆိုပြီးခေါင်းငြိမ့်လိုက်မိတယ်
ညနေကျတော့ ကိုထိုက်နဲ့ ခြံထဲမှာလမ်းဆင်းလျှောက်ကြတယ် ပန်းက ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ် ကိုကိုနဲ့ ဘယ်လိုဆိုတာကို ကိုထိုက်ကို ပြောပြခဲ့တယ် ကိုထိုက်က စိတ်ဝင်တစား နဲ့ ပန်းပြောတာ နားထောင်ပေးနေတယ် ပန်းက မေးလိုက်တယ်
” ကိုထိုက်ကော ရည်းစားတွေဘာတွေမရှိဘူးလား ” ဆိုတာ့
” လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်လောက်ကပြတ်သွားပြီ သူလဲ အခုသူ့အိမ်ထောင်နဲ့သူဖြစ်နေပါပြီ ”
” ကိုထိုက်သွားမတွေ့ဘူးလား ဆိုတော့ သူလဲ သူ့ဘဝနဲ့ သူ ကျွန်တော်လဲ ကျွန်တော့ဘဝနဲ့ ကျွန်တော် မနှောင့်ယှက်ချင်တော့ပါဘူး ” ခဏနေတော့ အန်တီက ညနေစာထမင်းစားဖို့လာခေါ်တယ် စားသောက်ပြီးတော့ အန်တီ့ကိုကူပြီးတော့ သူတို့နဲ့အတူ tv ထိုင်ကြည့်နေလိုက်တယ် ည ၉ ခွဲလောက်လဲ ကျတော့ ပန်းလဲ အိပ်ချင်တာ နဲ့ အိပ်ယာထဲဝင်ခဲ့တယ် မှေးခနဲ အိပ်ပျော်သွားချိန်မှာ အသံတွေကြားတာနဲ့ လန့်နိုးလာခဲ့တယ် ဒီအချိန်ကြီးဘယ်က ဧည့်သည်ပါလိမ့် ဆိုပြီး နားစွင့်နေမိတယ်
” အန်တီက အရာရှိလေးကို မျှော်နေတာ ” ဆိုတော့ အေးတိအေးစက်အသံနဲ့
” ဘယ်သူ့ကို လက်ခံထားပြန်ပြီလဲ ”
” ဟုတ်တယ် မနေ့က လေ ကောင်မလေးတယောက်ကို လက်ခံထားမိလို့ အဲဒါ ဒီမှာထားလို့ရလား ဒါမှမဟုတ် ဘယ်များ ပို့စရာရှိလဲမသိဘူး ”
” နံမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ အသက်ဘယ်လောက်လဲ ”
” ပန်းနုမေ အသက်က ၂၇ နှစ် “စာရွက်လှန်သံ ကြားလိုက်မိသလိုပဲ ပြီးတော့ အေးစက်စွာနဲ့
” စာရင်းထဲမှာ မပါဘူး ပြန်ပို့လိုက် ” တဲ့ ဘာတွေလဲ ပြီးတော့ အသံတွေတိတ်သွားတာနဲ့ ပန်းထွက်လာလိုက်မိတယ်
” သမီး မအိပ်သေးဘူးလား ”
” ဟို သမီး နံမည်ခေါ်သံကြားမိသလား လို့ ပါ ” ကိုထိုက်က
” အော် ဧည့်စာရင်းစစ် ပါ ပန်း ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး ” ဒါနဲ့ပန်းလဲ အိပ်ယာထဲ ပြန်ဝင်လာခဲ့လိုက်တယ် အသံတွေကြားနေရတယ် အိမ်မက်မက်နေသလို တကယ်လိုလိုနဲ့ အန်တီကပြောတယ်
” သား ကြားတယ်နော် သူကမှားပြီးရောက်လာတာတဲ့ သား ပြန်ပို့လိုက်ပါ ”
” မေမေ သားတို့ သူ့ကို ခေါ်ထားလို့မရဘူးလား ဟင် ”
” သားရယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ အထက်က သိရင် မေမေတို့ အပြစ်ပေးခံရလိမ့်မယ် မေမေ နားလည်ပါတယ် သား ဘဝချင်းမတူသူကို… ပြန်ပို့လိုက်ပါသားရယ် ”
” ဟုတ်ကဲ့မေမေ ကျွန်တော်မနက်ဖြန်မနက်စောစော ပြန်ပို့လိုက်ပါ့မယ် ” နိုးတဝက် ကြားတဝက်နဲ့ ပန်း လဲပြန်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်
မနက်စာစားပြီးတော့ အန်တီ့ကိုကူမယ်လုပ်တော့ ကိုထိုက်က
” ပန်းရေ ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ဆေးရုံကိုသွားကြည့်စရာရှိလို့ လိုက်ခဲ့ပေးပါလား တယောက်တည်းသွားရမှာပျင်းလို့ ပန်းလဲ အပျင်းပြေပေါ့လေ ” ဒါနဲ့ ပန်းလဲ လိုက်သွားခဲ့လိုက်တယ် လမ်းတလျှောက်လုံးမှာ ကိုထိုက် က ဘာစကားမှလဲမပြောဘူး ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံကို ရောက်လာခဲ့တယ် အခန်း ၄၀၃ ဆိုတဲ့ အခန်းတံခါးကို ဖွင့်လိုက် တယ် ပန်းကြောင်သွားတယ် အနောက်ကနေကြည့်တဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ပုံက မေမေနဲ့တော်တော်တူတာပဲ ဒါနဲ့
” မေမေ ” လို့ခေါ်လိုက်တာ မေမေ က ပြန်လဲမထူးဘူး ကုတင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ လူကိုပဲ ဂရုဏာသက်စွာ စိုက်ကြည့်နေတယ် ဒါနဲ့ ကုတင်ပေါ်က ဘယ်သူလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ ပန်း တော်တော်လေးတုန်လှုပ်သွားတယ် ဘုရားရေ ပန်း ပါလား ဒါနဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုပြီး လှည့်ကြည့်မယ် အလုပ်မှာ အနောက်ကနေ ဆောင့်တွန်းခံလိုက်ရသလိုခံစားလိုက်ရပြီး ခဏ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ အဆက်ပြတ်သွားခဲ့တယ် အတင်းပဲ မျက်လုံးက အားယူပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ မေမေက
” သမီး သမီးလေး သတိရလာပြီနော် ” တဲ့ ဝမ်းသာအားရနဲ့ ကုတင်ဘေးနားရှိခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တယ် ကိုထိုက်ကတော့ အခန်းအပြင်မှာ ရပ်နေတယ် ခဏနေတော့ ဆရာဝန်နဲ့ နာစ်မတွေ ကိုထိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖြတ်ပြီးလာတာကို တွေ့လိုက်ရတယ် ဆရာဝန်က ပန်း ကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုတယ် ပန်း အရာအားလုံးကိုသဘောပေါက်လိုက်ပါပြီ ဒါနဲ့
” ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ” လို့ တီးတိုးလေး ရေရွတ်လိုက်မိတယ် ကိုထိုက်က ပြုံုးပြပြီး ထွက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ် ဆရာဝန်က ပန်းကို နားမလည်စွာ မော့ကြည့်တယ် ပန်းလဲ ဆရာဝန်ကို ဖျော့တော့ ချိနဲ့တဲ့အပြုံးနဲ့ ပြုံးပြလိုက်မိပါတော့တယ်။
စာရေးသူ = ၀က်ဝံလေး
လွှတ်နေတယ်၊ မင်းတို့ လိုက်ကြမလား၊ ကားခလည်း မကုန်ဘူး၊ဒို့ အဒေါ်ပိုင်တဲ့ လိုင်းကားက ရန်ကုန်နဲ့ အဲဒီကို နေ့တိုင်း
သွေပျက်စရာ အိမ်ကြီးဇာတ်သိမ်းပိုင်းကို စာမျာက်နာ(၆)မှာ ဆက်ဖက်ပါသူငယ်ချင်းများ။ ချစ်ခင်လေးစားလျက်နေမင်းသူ။